20.02 Ny fenitrin'ny fiainana kristianina (1)
Anio Talata 20 Febroary 2018 dia ny Lioka 6.37-42, no sakafom-panahintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no baiko mipetraka sy ny fomba tokony hankatoavako izany eo amin' ny fiainako ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
37 Ary aza mitsara, dia tsy hotsaraina hianareo; aza manameloka, dia tsy hohelohina hianareo; mamelà, dia mba havela hianareo;
38 omeo, dia mba homena hianareo; fatra tsara sady ahintsana no afatratra ka mihoatra no homeny ho ao am-pofoanareo. Fa izay fatra ataonareo no hamarana ho anareo kosa.
39 Ary Jeso nanao fanoharana taminy koa hoe : Ny jamba va mahatari-dalana ny jamba ? Tsy hianjera any an-kady va izy roa ?
41 Ary nahoana hianao no mijery ny sombin-kazo izay eo amin’ ny mason’ ny rahalahinao, nefa ny andry izay eo amin’ ny masonao dia tsy mba tsaroanao akory ?
42 Ary ahoana no ilazanao amin’ ny rahalahinao hoe : Ry rahalahy, aoka hesoriko ny sombin-kazo eo amin’ ny masonao, nefa tsy mba hitanao ny andry eo amin’ ny masonao ? Ry mpihatsaravela-tsihy, esory aloha ny andry eo amin’ ny masonao, ary amin’ izany dia ho hitanao tsara ny hanesoranao ny sombin-kazo eo amin’ ny mason’ ny rahalahinao.
NY FENITRIN'NY FIAINANA KRISTIANA (1)
Manomboka amin’ny teny mandidy ny fampianaran’i Jeso Kristy eto : aza mitsara, aza manameloka, mamelà, omeo.
Nahoana Izy no manao izany fampianarana izany ?
Satria ny olona tsirairay avy dia samy manana ny fahalemeny koa.
Samy mpanota avokoa hoy ny Romana 3.23.
Koa hataon’ny olona samy manana fahotana sy tsy fahatanterahana ahoana no hitsara na hanameloka ny hafa amin’ny fahotany sy ny tsy fahatanterahany na dia tsy mitovy tokoa aza izany fahotana izany ?
Henjana ny tenin’i Jeso manaraka izany fa raha mitsara olona isika dia Izy Jeso mihitsy kosa no hitsara antsika amin’ny fahotantsika.
Raha miaina tahaka ny olon-kafa rehetra ny Kristiana, izany hoe tsy maneho ny fenitrin'ny fiainana kristiana napetrak’i Jeso, dia azo lazaina fa mpitarika jamba ihany izy.
Koa raha samy jamba no mifampitarika dia ho latsaka any an-kady izy roa (39).
Saingy tsy izany fa ny Kristiana no manana ny fahiratana avy amin’ny Tenin’Andriamanitra mba hitarika ireo jamba ara-panahy ka hamantaran’izy ireo ny tena fiainana dia izay ao amin’i Jeso Kristy.
Sombin-kazo sy andry, izany no hampitahan’i Jeso ny tsy fahamendrehana eo amin’ny olona roa. Raha mahita izay tsy mety amin’ny namanao ianao dia tsarovy fa kely tahaka ny sombin-kazo ihany izany fa izay eo aminao kosa dia tahaka ny andry no habeny.
Entina hampisaintsaina antsika izany hanana fanetren-tena fa isika koa manana ny fahalementsika.
“Aoka ho zatra amin’ny fietrena ianareo.”
Hamaranantsika itý Mana androany itý dia hivavaka ho an'ireo mpitondra fivavahana sy ny Kristiana isika.